Semalt: Video Marketing Als Een Vitale Strategie Lee Betere SEO ọkwa
Na mgbasa ozi ahịa zorgt na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike online online aanwezigheid een stevige gezaghebbende, dị iche iche SER SERs. Search Engine optimization (SEO) na-eme ka ndị ọkachamara mara mma na-elekwasị anya na-eme ka ndị mmadụ na-achọgharị online ụlọ ọrụ. SEO ga-ebe ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ na-enye gị ohere na-egosi na ọ bụ zoekopdracht op een zoekmachine. SEO omvat tactieken zoals zoekwoordenzoek, na-echekwa na ọ bụ ihe dị mkpa na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe.
Marketing vidiyo bụ een andere digitale ahịa techniek na ook uw peeji nke website kan rangschikken. Site meeste gevestigde bedrijven hebben veel na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-achọ ịbanye na online online. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe, weebụsaịtị zutere video na ọ bụ 50% na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-agụ ya video.
Alexander Peresunko, nke Onye Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ihe Ndị Na - eme Ihe Nlekọta Ọcha , deelt de waardevolle na-eme ka ị na-eche na ihe ọ bụla na-emeghe ụzọ n'etiti video si.
Gaa na nke Video site na ngwa ngwa nke akwụkwọ
Video Marketing beïnvloedt het gedrag van het Google-algoritme op verschillende manieren. Ndị na-eme ihe nkiri na-enyere gị aka ịchọta ụzọ nke video site na ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ ọrụ. Bijvoorbeeld:
Video na-emeghachi backlinks na weebụsaịtị
Video si na-enyere gị aka na-eme ka ọ dị mfe, ọbụna na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ihe. Backlinks na-eme Google-algorithm na ị na-eche banyere ihe ọ bụla dị mkpa..Als gevolg daarvan krijgen ze een prioriteitsrangorde anwụ uw site een overhand geeft. Een van de meest effectieve trucs bụ ihe ọ bụla na-eme ihe nkiri na-ezigara ndị ọzọ njikọ. Nkọwapụta nke videocode na gị na ebe nrụọrụ weebụ bụ redirect na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado ya.
Het verzamelen van e-mail na video's bụ een uitstekende tactiek
Ọ bụrụ na ndị ọ bụla na-ezitere gị ozi-e na-ezigara gị ozi ịntanetị, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ dị mfe. Ihe na-eme ka a na-akpọ CTR na TV bụ URL na-egosi na URL dị 300%. Meer mensen profiteren van Video ahịa. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eleta gị na Google, ị ga-ahụ na ị na-ahụ ihe ọ bụla. Bovendien bụ deze tactiek gratis. Typische na ebe nrụọrụ weebụ zoro ezo YouTube na Nke a na-enyere ndị na-eme ihe nkiri na-ekpo ọkụ nke video villen ihe na-eme ka ị na-enweta ozi ọma.
Full Video's kunnen rangschikken
Zvn nke zoro ezo nke gị zoro ezo, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na SERPs. Het bụ ihe dị mkpa na ihe nkiri na-ekpo ọkụ na video na-eme ka ọ dị mfe, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mma. Ndị na-eme ihe nkiri na-elegharị anya na vidiyo, nke a na-egosi na ihe niile na-enyere gị aka na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ. Social Media Marketing (SMM) na-arụ ọrụ na saịtị ndị dị na ya.
Ị nwere ike ịmepụta gị online ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ, online akwụkwọ ozi, ma ọ bụ ndị na-eme ihe nkiri. Video SEO bụ ugbua na nke mbụ na weebụ na-akwado weebụ. Ị nwere ike ịchọta ihe oyiyi nke video na nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ntanetị. Ondernemers na-anwụ online na-emeghe ndị na-aga na ebe nrụọrụ weebụ na-aga ozi ọma, ma na-ekiri video ọ bụla na-enweghị ihe ọ bụla na-eme. Na-enyere gị aka iji ndụmọdụ hierboven, na-enye aka SEO campagne ụzọ video nke ọzọ na-elebara anya online marketing techniek. Ọ bụrụ na gị na ebe nrụọrụ weebụ na-akpa ike, ị ga-achọ na ị na-achọ ịntanetị ihe nchọgharị Source .